Ururka Iskaashiga Islaamka oo Soomaaliya ka saacidaya furashada 21 Safaaradood – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Soomaaliya iyo Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis dhigaya in dib loo furo 21 safaarado ah oo ay Soomaaliya ku lahayd dalalka xubnaha ka ah ururkaas, sida uu xaqiijiyay sii-hayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Heshiiska waxaa labada dhinac u kala saxiixay sii-hayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo Madaxa mashaariicda Ururka Iskaashiga Islaamka, Maxamed Yaxye Mufarax.
Maxamed Yaxye Mufarax ayaa caddeeyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo furi doono safaaradahaas.
Beyle ayaa tilmaamay inay Ururka Iskaashiga Islaamka ka go’an tahay in dib loo dardargeliyo xiriirkii ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo dalalka ku jira ururkaas, wuxuuna xusay inuu heshiiska muhiim u yahay xiriirka arrimaha dibadda.
Dhaqaatiir reer Hindiya oo ku guuleystay iney nin ku talaalaan labo gacmood oo qof kale leeyahay!